५५ प्रतिशत को’रोना भा’इरस पादबाट सरिरहेको छ भन्ने विज्ञले दिएको यस्तो तथ्यबाट दुनियाँ चकित ! – Sanchar Patrika
July 7, 2020 200
काठमाडौ । विश्वभर महामारीका रुपमा रहेको को’रोना भा’इरस (कोभिड–१९) ले हाम्राबीचमा धेरै कुराहरु कुराहरु ल्याएर आएको छ । यो के हो ? कसरी फैलन्छ ? रोकथाम गर्न के गर्ने ? यी अत्यन्तै म’ह’त्व’पुर्ण प्रश्नहरु हुन् । किनभने मान्छेहरु आ–आफ्नै तरिकाले यी र यस्तै प्रश्नहको जवाफ दिदैंछन् । सामान्य रुपमा हेर्दा अहिले को’रोना भा’इरस एक प्राकृतिक महामारी भएको बताइन्छ ।
तर यसमा सबैजना सहमत छैनन् । धेरैलाई लाग्छ कि यो त मान्छेहरुले बनाएको जैविक भा’इरस हो । अहिलेसम्म हात मिलाउँदा, कसैसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा, वा थुकको छिट्टाबाट पनि को’रोनाभा’इरस फैलने डर हुन्छ । कतिपयले यो भाइरस कपडा, लगायत अन्य माध्यमबाट पनि सर्छ भन्दै आएका छन् । माक्स, लगाउँने, एक्लै बस्ने र आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्नेजस्ता तमाम कुराहरु रहेका छन् । सायद यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालका एकजना सांसदले महले को’रोनालाई भगाउन सकिन्छ भन्ने बयान दिनुभयो ।
यो बीचमा यो भन्दा बाहेकका कुराहरु पनि आएका छन् । सुरुवातमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हावाबाट कोरोना फैलन सक्छ भनेको थियो । उस्ले मान्छेहरु सम्पर्कमा आउँदा को’रोना सर्छ भन्ने कुरा धेरै पछि मात्रै जानकारी दिएको थियो । अहिले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई स्थिर राख्न सहयोग गर्ने पादबाट पनि को’रोना सर्छ भन्दै केही चिकित्सक बाहिर आएका छन् । तर उनीहरुको कुरालाई विज्ञहरु प्रष्ट पार्न सक्दैनन् ।
ति डाक्टर भन्छन कि कोभिड–१९ खोक्दा, थुकका थोपा, हात मिताउँदा वा सं’क्र’मि’तहरुको सम्पर्कमा आउँदा मात्रै नभएर पादबाट पनि को’रोना सर्न सक्छ । अस्ट्रेलियाका डाक्टर एन्डी ट्यागले रिपोर्ट गरे कि यस वर्षको सुरुमा को’रोनोभा’इरस बि’रा’मी’ह’रूबाट लिइएको विभिन्न परीक्षणहरूको वि’श्लेषण गरेपछि उनलाई लाग्यो कि पादले गर्दा को’रोनाभा’इरस हुन सक्छ ।
उनले आफ्नो अनुसन्धानलाई आधार बनाउँदै कोभिड–१९ का ५५ प्रतिशत बिरामीहरूमा पादका कारण को’रोनाभा’इरस सं’क्र’मण भएको बताएका थिए । चिकित्सकले यसभन्दा पहिले फार्मलाई पादको सानो कणबाट कोभिड–१९ सं’क्र’मण हुने भन्दै चेतावनी दिएका छन् । हामीले ग्यास निष्कासन गर्दा निस्कने ब्याक्टेरियामा को’रोना सं’क्रमण गराउन सक्ने क्षमता हुन्छ ।
डा. ट्यागको सुझावको बाबजुद पेसेन्टएक्सेस डटकमका क्लिनिकल निर्देशक डा. सारा जार्विसले कोरोनाभाइरस हावाबाट सर्छ भन्ने कुरामा शं’का व्यक्त गरेकी छिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि हावाबाट सर्ने कुरा अहिले आएर इन्कार गरिसकेको छ । उनले द सन अन’लाइ’नलाई भनिन, ‘कसैलाई भाइरस सं’क्रम’ण हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ यदी तिनीहरू टाँसिए रहेको भागमा कुनै सं’क्र’मित व्यक्तिले पादेर गयो ।’
उनले थप्दै्र भनिन, ‘तपाई खोकी वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ, वा कडा सतहमा छुँदा तपाईको हातले मुख छोपेर खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नजिकको व्यक्तिको सम्पर्कमा भा’इरस आउँन सक्छ ।’ जे होस्, डा.। जार्विसले मानिसहरूलाई शौचालयको राम्रो सरसफाई राख्न आग्रह गरेकी छन् । यसरी पनि पादमा पनि भाइरस देखिएको प्रमाण फेला पर्न सक्छ । उनले भनिन, ‘को’रोनाभा’इरसको केहि रिपोर्टहरू पूमा अवस्थित छन् । खोकी र ज्वरोजस्ता अन्य लक्षणहरू प्राप्त गर्नु अघि एक वा दुई दिनमा एकपटक पखाला हुने १० जनामा ​​एक जना थिए । यसले बाथरूम सफा गर्ने सम्बन्धमा थप सावधानी अपनाउनुको महत्त्वलाई जोड दिन्छ भने यदि कसैलाई को’रोनाभा’इरसका लक्षणहरू छन् भने अर्कोलाई यसरी पनि संक्रमण हुन सक्छ ।’
तिनीहरूले फेला पारे कि पहिलो पेट्री डिश सफा नै रह्यो, जबकि दोस्रोलाई ब्याक्टेरियाहरू रातभरि अंकुरित रहेको देखियो । तर परीक्षणमा पाइएका ब्याक्टेरिया हानिकारक थिएनन् । यस वर्षको सुरूमा, चीनको रोग नियन्त्रण एवं रोकथाम केन्द्रले घोषणा गर्‍यो कि प्यान्ट को’रोनोभा’इ’रस बोक्ने मुसा विरुद्ध प्रभावकारी अवरोध हुनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य निकायले यदि प्यान्टहरू लगाउँदछ भने कि मुसाले भा’इ’रस सार्न असम्भव छ भनेका थिए । यद्यपि उनीहरुले चेतावनी दिए कि यदि सं’क्र’मित बि’रा’मीले पाइन्ट लगाउँदैन भने, उनीहरूले ठूलो मात्रामा पाद छोडे अनी त्यो पादलाई कसैले सुगन्धित गरे भने जोखिममा पर्न सक्छन् ।
यस महिनाको शुरूमा, वैज्ञानिकहरूले मानिसहरूलाई फ्लश गर्नु अघि शौचालय बन्द गर्न आग्रह गरे किनभने उनीहरू भन्छन् कि ‘एरोसोलिज्ड पू’ मार्फत को’रोनोभा’इरोस फैलिन सक्छ । एउटा अध्ययनले भन्छ कि ‘शौचालय प्लम’ को कारणले दिसा र पिसाबलाई शौचालयबाट हावामा धकेल्न र अन्य सतहहरूमा फैलाउन सक्छ ।
स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन कि कुनै पनि प्रकारको को’रोनोभा’इरस रोक्न उत्तम तरिका राम्रो सरसफाइ नै उत्तम तरिका हो । तपाईको सं’क्रमणको जोखिम कम गर्न तपाईले आफ्नो हात साबुन र पानीले प्रायः २० सेकेन्डसम्म धुनु पर्छ, तपाईको आँखा, नाक र मुखलाई अनावश्यक रुपमा हातले छुनु हुँदैन र बिरामी मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्दा माक्स, पीपीई लगाउँनुपर्छ ।
यदि तपाईलाई चिसो को’रो’नासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू छन् भने, तपाईं अरूलाई बचाउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र बिरामी हुँदा घर भित्र रहँदा अरूसँग हुने अनावश्यक सम्पर्कबाट बच्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो मुख र नाकलाई टिशूले कभर गर्नुपर्दछ । जब तपाईं खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ । त्यो बेला प्रयोगपछि उक्त टिशुलाई टाढा फाल्नुहोस् र आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुहोस् । तपाईंले छुनु भएको वस्तुहरू र सतहहरू सफा र डिसइन्फेक्टिंग पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
Prevइनारबाट निस्कियो ग्यास, सलाइ कोर्दा जल्यो महिलाको अनुहार
Next‘बुवाको आ,त्माले भन्ला-तिम्रो जातको कथाले मलाई सालिक बनायो’